The 100 (2014) Season5Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
7 Seasons 100 Episodes
Synopsis of The 100 (2014) Season5Complete
Season4အပွီးမှာ Nuclear ဓာတျပေါငျးဖိုတှပွေိုကပြီး ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံး လူမနနေိုငျအောငျ Clean ဖွဈခဲ့ပီး ၆နှဈကွာတဲ့ အခါမှာမှ ဇာတျလမျးစထားပါတယျ။ အာကာသပျေါရောကျရှိသှားတဲ့ လူတဈစုရယျ ကလုတျတှငျးတဲ့ ပုံးအောငျးနတေဲ့ လူတှရေယျ နောကျထပျ ရောကျရှိလာတဲ့ စဈတပျဆနျဆနျ လူတဈစုရယျ သူတို့သုံးဖှဲ့သားဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာတော့ . . .
ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Van ဖွဈပါတယျ
Season4အပြီးမှာ Nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေပြိုကျပီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး လူမနေနိုင်အောင် Clean ဖြစ်ခဲ့ပီး ၆နှစ်ကြာတဲ့ အခါမှာမှ ဇာတ်လမ်းစထားပါတယ်။ အာကာသပေါ်ရောက်ရှိသွားတဲ့ လူတစ်စုရယ် ကလုတ်တွင်းတဲ့ ပုံးအောင်းနေတဲ့ လူတွေရယ် နောက်ထပ် ရောက်ရှိလာတဲ့ စစ်တပ်ဆန်ဆန် လူတစ်စုရယ် သူတို့သုံးဖွဲ့သားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ . . .
ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ်
Home PageThe 100 (2014) Season5Complete